कुन बार कुन भगवानको पूजा गर्दा मनोकांक्षा पूरा हुन्छ ? |
Home धर्म/दर्शन कुन बार कुन भगवानको पूजा गर्दा मनोकांक्षा पूरा हुन्छ ?
शनिबारः यो दिन भगवान शनिदेवप्रति समर्पित छ । त्यसैले यदि तपाईंको शनिको दशा चलिरहेको छ भने यो दिन मन्दिरमा शनिदेवको पूजा गरेर शान्त पार्न सक्नु हुनेछ । यो दिन भगवान हनुमान तथा काली माताको पनि पूजा गरिन्छ । शनिबारलाई अकाल मृत्यु निवारण गर्ने बारको रुपमा पनि लिइन्छ । यो दिन शनिदेवका साथै भगवान रुद्रको पूजा गरिन्छ । शनिबारको दिन कालो रंगको कपडा लगाउने र कालो वस्तु गरिबलाई दान गर्दा फल प्राप्ति हुनेछ । – खबरहबबाट
आज भगवान् श्री रामचन्द्रको जन्म दिन, रामनवमी पर्व मनाइँदै
मंगलबारको ब्रत लिनुहुन्छ ? के गर्ने, के नगर्ने ?